Izicelo ze-iPhone | Izindaba ze-IPhone
Ku-App Store kunezinkulungwane zezicelo futhi kunzima kakhulu ukuthola eyodwa evumelana nokufunayo uma ungalazi igama layo. Ku-iPhone ye-Actualidad sizokufundisa nsuku zonke izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu adedelwa ifoni ye-Apple. Sizophinda futhi sithole izinhlelo zokusebenza zokufuna ukwazi nezinoveli zakho ukuze uhlale umangazwa ukusetshenziswa ongakunika i-iPhone yakho. I- ukuhlaziywa kanye nokubuyekezwa bazongena ekujuleni ngokwengeziwe ukuze wazi wonke amathuba wohlelo lokusebenza.
Qala ukulanda izinhlelo ze-iPhone yakho
Uma ulahlekile kancane futhi umusha ku-App Store, nazi izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu zamahhala nezikhokhelwayo ongazilanda ku-iPhone yakho.
Ngokukhethwa okungenhla, uzothola gcwalisa i-iPhone yakho ngezinhlelo zokusebenza okusha nokuhehayo.
I-Apple izovumela abathuthukisi ukuthi bakhuphule intengo yokubhaliselwe kwabo ngemikhawulo ethile
Por UKarim Hmeidan kwenza Amaminithi angu-19 .
Sesivele sikhohliwe kodwa eminyakeni embalwa edlule besingekho i-App Store noma isitolo sohlelo lokusebenza. Namuhla...
I-WhatsApp izokuvumela ukuthi ushiye amaqembu ngaphandle kokwazisa abanye abasebenzisi
Por U-Angel Gonzalez kwenza Amahora we-6 .
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sifunde ukuthi i-WhatsApp ibihlanganisa izihlungi zosesho enguqulweni ye-beta yohlelo lwayo...
Por U-Ignacio Sala kwenza Amahora we-15 .
I-WhatsApp iqala ukuhlola izihlungi ekusesheni ku-beta yayo
Ama-beta e-WhatsApp avuselelwa njalo. Emasontweni ambalwa edlule Imiphakathi imenyezelwe ngokusemthethweni, iphuzu loku...
I-NapBot ye-Apple Watch ibuyekezwa kanye nokuhlaziywa kwe-apnea yokulala
Por UKarim Hmeidan kwenza Isonto eli-1 .
Kuningi osekushiwo mayelana namathuba esinawo okusebenzisa amadivayisi afana ne-Apple Watch ukuqapha ukuthi ...
Por U-Angel Gonzalez kwenza Isonto eli-1 .
Izinhlelo zokusebenza zemiyalezo ziyisinkwa sansuku zonke kumishini yethu. Ngokukhulayo bayingxenye yokuthi...
Por U-Angel Gonzalez kwenza Amaviki angu-2 .
Imishini ye-WhatsApp ingaphezu kokugcoba. Amanoveli aqhubeka inyanga nenyanga futhi wonke ayafana…
Izolo nje sikutshele ukuthi i-1Password ikhiphe isibuyekezo esikhulu kunazo zonke endaweni yayo kuze kube manje. Imayelana...
Isibuyekezo esimangalisayo se-1Password 8 manje siyatholakala ku-beta yomphakathi
Ukuvikeleka kwama-akhawunti ethu kubalulekile ukuze ulwazi lwethu lwabasebenzisi lube lukhulu. Ukuthuthukisa lokho kuzizwisa...
Yini entsha ku-WhatsApp: Imiphakathi, amafayela afika ku-2 GB nangaphezulu
I-WhatsApp ingenye yezinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu nsuku zonke ngabasebenzisi abaningi. Ezinyangeni ezedlule…
'Shintshela ku-Android' Uhlelo olusha lwe-Google ukuze udlulise idatha isuka ku-iOS iye ku-Android
I-Apple isebenze indlela ende yokuklama ithuluzi elikuvumela ukuthi udlulise idatha kusuka kudivayisi ye-Android iye ku-iOS…
Vimbela i-WhatsApp ekulondolozeni izithombe namavidiyo esondweni lakho
Konke mayelana namabhulokhi kuTelegram
Ungazi kanjani ukuthi ngubani ongilandele ku-Instagram
Uhlelo lokusebenza lwePordede (manje olubizwa nge-Plusdede) lungena ngesinyenyela ku-App Store
Ungangeza kanjani izithombe namavidiyo kusuka esondweni endabeni yethu ye-Instagram
Imidlalo ehamba phambili ku-App Store
Ungaguqula kanjani amavidiyo we-YouTube abe yi-Mp3 nge-iPhone
"Hei Siri" ayikusebenzeli? Zama lezi zixazululo
Thola i-Afterlight mahhala ngohlelo lokusebenza lwe-Apple Store. Sikukhombisa ukuthi kanjani
Ukuhamba komsebenzi: Kuyini, kusebenza kanjani nokuthi ngingenzani ngakho